နိုငျငံဝနျထမျးကောငျးပါမဈကို ဘယျလိုလြှောကျရမလဲ၊ ဘာကားတှရေနိုငျမလဲ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
နိုငျငံဝနျထမျးကောငျးပါမဈကို ဘယျလိုလြှောကျရမလဲ၊ ဘာကားတှရေနိုငျမလဲ
လုပျသကျ ၂၅ နှဈ အထကျ နိုငျငံဝနျထမျးကောငျးလကျမှတျရပွီး(၂-၁-၂၀၂၀) သူဝနျထမျးအမြားစုမြား ၂၀၁၈-၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှဈထုတျမျောတျောယာဉျမြားကို နိုငျငံတျောမှ အခှနျတခြို့ဖွလြေော့ပေးပွီး တငျသှငျးခှငျ့ပွုရနျစီစဉျလကျြရှိပါတယျ ။
ခံစားခှငျ့ရှိသောဝနျထမျးအသီးသီးထံသို့လညျး အကွောငျးကွားစာနှငျ့အတူ ဖွညျ့စှပျရနျဖောငျပါပို့ထားပွီးဖွဈပါတယျ။
သတျမှတျထားသော ကား၏ရနျကုနျရောကျခနျ့မှနျးကာစတနျတနျဖိုးအတိုငျး ခြိနျညှိ ဖွညျ့သှငျး လြောကျထားရနျလိုအပျပါတယျ။
သိနျး၁၂၀၀ ထိ ကားအြိုးအစားမြားကို သတျမှတျ ရာထူးအလိုကျလြောကျထားခံစားခှငျ့ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
အဲလိုလြောကျရာမှာ အမြားစုက ကိုယျပိုငျ နိုငျငံခွားငှအေကောငျ့ မရှိ သညျကတဈကွောငျး နိုငျငံခွားငှေ ကိုတခွားနိုငျငံသို့ ကားဖိုးလှဲခရြေနျခကျခဲနိုငျမှာစိုး၍ ကွားခံကုမ်ပဏီအဖွဈ စီးပှားကူးသနျးအသိအမှတျပွု Car Show room , Car Sales Centre မြား (မိမိနှငျ့နီးစပျရာ) တို့ကိုဖွညျ့စှပျပေးရနျ နှငျ့ သကျဆိုငျရာ ကုမ်ပဏီ၏ နိုငျငံခွားငှဘေဏျ့အကောငျ့နံပါတျကိုပါ ပူးတှဲ ဖွညျ့သှငျးသငျ့ပါသညျ။
မိမိတငျသှငျးခှငျ့ရရှိသောတနျဖိုးအလိုကျ ကားအမြိုးအစား မျောဒယျ နှငျ့ ရနျကုနျအရောကျခနျ့မှနျးတနျဖိုး (CIF) ကိုလညျး ရေးသားပေးဖို့လိုအပျပါတယျ ။
မွနျမာပွညျဈေးကှကျနှငျ့ကိုကျညီပွီးတငျသှငျးသငျ့သောကားအခြို့ကိုတနျဖိုးအလိုကျ ခှဲခွားလြောကျထားနိုငျရနျအောကျတှငျဖျေါပွပေးထားပါတယျ ၊
သိနျး ၃၀၀ ထိလြောကျထားနိုငျသောကားမြား
Toyota RAV4 2018 , 2019
Toyota Camry 2018 , 2019
Toyota CHR. 2019
Ford EDGE 2018,2019
Ford Escape 2018,2019
Chevrolet Malibu 2018,2019
Chevrolet Equinox 2018, 2019
Mitsubishi ASX 2019 , 2020
Honda CRV 2018 , 2019
Honda HRV 2018 , 2019
Nissan Qushqai. 2018 , 2019
Hyundai Sonata 2019 , 2020
သိနျး ၅၀၀ ထိလြောကျထားနိုငျသောကားမြား
Lexus RX300 , RX350 , NX300 , GS350 ,
GS200 , ES350 , GX460
Toyota Highlander , Avalon
Volvo XC60 , XC90
Infinity Q50 , Q70 , QX60 , QX50 , QX80
Cadillac CT6 , CTS, XT5 , XTS
BMW X3 , X4
မှတျခကျြ။ အထကျဖျေါပွပါကားမြားအပွငျတခွားကားမြားစှာကိုလညျးလြောကျထားနိုငျပါတယျ ။ ဈေးကှကျဝငျပွီး ပါမဈကိုအကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျစရေနျရှေးခယျြပေးထားခွငျးဖွဈပါတယျ ။
Vios, Avansar အပွငျတခွား တနိုငျကားမြားကိုလညျးတငျသှငျးနိုငျပါတယျ ။
Min Min Maung Services Co.;Ltd
အမှတျ (၁၉/၂၀) ဗဟိုလမျးမကွီးပျေါ ၊
(၇)ရပျကှကျ ၊ ကမာရှတျမွို့နယျ ၊ ရနျကုနျ။
Credit; Min Min Maung (Facebook)
နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းပါစမ်ကို ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ၊ ဘာကားတွေရနိုင်မလဲ
လုပ်သက် ၂၅ နှစ် အထက် နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းလက်မှတ်ရပြီး(၂-၁-၂၀၂၀) သူဝန်ထမ်းအများစုများ ၂၀၁၈-၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်ထုတ်မော်တော်ယာဉ်များကို နိုင်ငံတော်မှ အခွန်တချို့ဖြေလျော့ပေးပြီး တင်သွင်းခွင့်ပြုရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ် ။
ခံစားခွင့်ရှိသောဝန်ထမ်းအသီးသီးထံသို့လည်း အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူ ဖြည့်စွပ်ရန်ဖောင်ပါပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားသော ကား၏ရန်ကုန်ရောက်ခန့်မှန်းကာစတန်တန်ဖိုးအတိုင်း ချိန်ညှိ ဖြည့်သွင်း လျောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
သိန်း၁၂၀၀ ထိ ကားအျိုးအစားများကို သတ်မှတ် ရာထူးအလိုက်လျောက်ထားခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုလျောက်ရာမှာ အများစုက ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံခြားငွေအကောင့် မရှိ သည်ကတစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားငွေ ကိုတခြားနိုင်ငံသို့ ကားဖိုးလွဲချေရန်ခက်ခဲနိုင်မှာစိုး၍ ကြားခံကုမ္ပဏီအဖြစ် စီးပွားကူးသန်းအသိအမှတ်ပြု Car Show room , Car Sales Centre များ (မိမိနှင့်နီးစပ်ရာ) တို့ကိုဖြည့်စွပ်ပေးရန် နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ၏ နိုင်ငံခြားငွေဘဏ့်အကောင့်နံပါတ်ကိုပါ ပူးတွဲ ဖြည့်သွင်းသင့်ပါသည်။
မိမိတင်သွင်းခွင့်ရရှိသောတန်ဖိုးအလိုက် ကားအမျိုးအစား မော်ဒယ် နှင့် ရန်ကုန်အရောက်ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (CIF) ကိုလည်း ရေးသားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ဈေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးတင်သွင်းသင့်သောကားအချို့ကိုတန်ဖိုးအလိုက် ခွဲခြားလျောက်ထားနိုင်ရန်အောက်တွင်ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ် ၊
သိန်း ၃၀၀ ထိလျောက်ထားနိုင်သောကားများ
သိန်း ၅၀၀ ထိလျောက်ထားနိုင်သောကားများ
မှတ်ချက်။ အထက်ဖေါ်ပြပါကားများအပြင်တခြားကားများစွာကိုလည်းလျောက်ထားနိုင်ပါတယ် ။ ဈေးကွက်ဝင်ပြီး ပါမစ်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေရန်ရွေးချယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
Vios, Avansar အပြင်တခြား တနိုင်ကားများကိုလည်းတင်သွင်းနိုင်ပါတယ် ။
အမှတ် (၁၉/၂၀) ဗဟိုလမ်းမကြီးပေါ် ၊
(၇)ရပ်ကွက် ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။
ကားခနှဈဆတောငျး၍ လူအပွညျ့တငျဆောငျခဲ့သညျ့ ပနျတျောဦးယာဉျလိုငျးအား ပိတျသိမျးမညျ